၁၇-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ. ပြည်တွင်း စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများ
စီးပွားရေး , June 17, 2020
၁၆-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ. နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်းများ
စီးပွားရေး , June 16, 2020
မန္တလေးဘူတာကြီးမှ လက်ရှိပြေးဆွဲနေသည့် မန္တလေး-ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ရထားခရီးစဉ်အချို့ ကို ယနေ့ (ဇွန် ၁၆ ရက်)မှ စတင်၍ ထပ်တိုးပြေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့မီးရထား(မန္တလေးဘူတာကြီး) မှ သိရသည်။ ကိုဗစ်၁၉ကာလအတွင်း ရထားခရီးစဉ်များ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားချိန်တွင် မန္တလေး-ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ရထားခရီးစဉ်...
( ၁၆-၆-၂၀၂၀ ) ရက်နေ. ရန်ကုန်၊မန္တလေး ရွှေဈေးနှုန်းများ
( ၁၆-၆-၂၀၂၀ ) ရက်နေ. ရန်ကုန်၊မန္တလေး ရွှေဈေးနှုန်းများ တစ်ကျပ်သားရောင်းဈေးများဖြစ်ပါသည်။
၁၆-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ. ပြည်တွင်း စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများ
စီးပွားရေး , June 15, 2020
၁၅.၆.၂၀၂၀ ရက် နေ.လည် ၂နာရီ မှာ တောင်ကျရေကြောင့်ဂုတ်တွင်းကားလမ်းပိတ်နေ(Video) ၁၅.၆.၂၀၂၀ ရက် နေ.လည် ၂နာရီ မှာမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် မန္တလေး – လားရှိုး လမ်းမပေါ်ရှိ ဂုတ်တွင်းမှာ တောင်ကျရေများ ထိုးကျပြီး ကားလမ်းပိတ်နေပါတယ်။...
( ၁၅-၆-၂၀၂၀ ) ရက်နေ. ရန်ကုန်၊မန္တလေး ရွှေဈေးနှုန်းများ
( ၁၅-၆-၂၀၂၀ ) ရက်နေ. ရန်ကုန်၊မန္တလေး ရွှေဈေးနှုန်းများ တစ်ကျပ်သားရောင်းဈေးများဖြစ်ပါသည်။
၁၅-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ. နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်းများ
၁၅-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ. ပြည်တွင်း စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရည်သုံးပြီး ပထမဆုံး ဓာတ်အားစတင် ထုတ်လုပ်ပြီ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရည်သုံးပြီး ပထမဆုံး ဓာတ်အားစတင် ထုတ်လုပ်ပြီ 14.6.20 (တနင်္ဂနွေ) နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့သုံး အကြီးဆုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ရည်ကို အသုံးပြု၍ ပထမဆုံး ဓာတ်အားစတင် ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။...